Intle iCasita ¨ngaphezu koLwandlekazi lweAtlantiki
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAndrés & Natasha
Le Casita ibukekayo, enelanga engaselwandle ixhobe ngokupheleleyo ngazo zonke izinto ezibalulekileyo zeholide kunye nobunewunewu obongezelelweyo ukwenza ukuhlala kwakho ukonwabele ngakumbi: iChromecast, iNetflix, umatshini wekofu weNespresso, i-snorkels, iambrela yaselwandle, iitawuli zaselwandle kunye nebhegi encinci epholileyo.
Kukuhamba nje imizuzu eli-15 ukuya kwikomkhulu lesiqithi, iSanta Cruz de Tenerife.
Uza kuyishiya iLa Casita ikhululekile, iphinde yatshajwa ngesandi esithambileyo solwandle kwinkumbulo yakho.
ILa Casita ligumbi elinomtsalane, eliqaqambileyo elinembono emangalisayo yepanorama ngaphaya koLwandlekazi lweAtlantiki kwindawo entle yaseTenerife.
Ifakwe kwilali encinci nefihlakeleyo enofikelelo olukhulu koohola bendlela ukuze baphonononge yonke into efumaneka yiTenerife: iilwandle ezintle zasendle, iindlela ezinomtsalane zokukhwela intaba kunye nenkcubeko kunye nokutya kwesixeko esilikomkhulu kumganyana nje omfutshane.
Kukho igumbi lokuhlala elinesicwangciso esivulekileyo kunye nekhitshi elinebar yesidlo sakusasa, igumbi lokulala eliphindwe kabini labucala, igumbi lokuhlambela langoku kunye nethafa elinelanga.
Igumbi lokuhlala kunye nekhitshi
Igumbi lokuhlala elivulekileyo kunye nekhitshi yindawo efanelekileyo yokuphumla, ukupheka ukutya okuthandekayo kunye nemveliso yasekhaya kwaye uchithe ixesha lokuphumla ngombono wolwandle ongezantsi.
Kukho i-sofa enezihlalo ezibini (iphinde iguqule ibe yibhedi yesofa ephindwe kabini) izitulo ezimbini ze-armchairs, itafile yekhofi, kunye ne-TV ene-Chromecast kunye nentambo ye-HDMI ukuze ukwazi ukubukela iimuvi kunye nochungechunge.
Ibar yesidlo sakusasa yahlula igumbi lokuhlala ekhitshini, eliza lixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into oyifunayo ukuze uzilungiselele, kubandakanya:
• I-oveni kunye nesitovu se-ceramic
• Umatshini wekofu weNespresso kunye ne-Italian percolator
• Umatshini wokuhlamba (ngaphandle)
• Iimbiza neepani.
Yiba nomfanekiso-ngqondweni ulele ebhedini unembono engaphazamisekiyo yoLwandlekazi lweAtlantiki, ilanga lingena ngefestile, impepho epholileyo yolwandle ezinyaweni zakho...
Igumbi lokulala elincinci, kodwa elenziwe ngokugqibeleleyo elinebhedi ephindwe kabini (i-150 cm), iiwodrophu ezakhelwe ngaphakathi zokugcina izinto zakho, kunye neefestile ezikufutshane nodonga ukuya eludongeni ezivuleleka ngokupheleleyo. Kukwakho negumbi leemfama ezimnyama zokulala ngeholide okanye ukulala emva kwemini.
Ngena kwishawa, isinki, indlu yangasese kunye nendawo yokugcina izinto zakho zangasese. Awuyi kufuna enye into enolwandle olungaphambili ukuze uhlambele kulo.
I-terrace ilungele ukutya kunye nokutshisa ilanga, kunye netafile kunye nezitulo, i-awning xa ufuna ikhefu elangeni kunye nezitulo ezimbini zomgangatho.
Ngombono wayo omangalisayo osemazantsi-mpuma, unokubukela ukuphuma kwelanga okumangalisayo ukusuka kwithafa kwaye ukonwabele ukukhanya kwelanga imini yonke.
Emva kokutshona kwelanga, yidla isidlo sakusihlwa kwi-terrace phantsi kwengubo yeenkwenkwezi kunye nesandi somlingo solwandle.
Ngokuxhomekeke kwi-tide, unokuqubha, ukubheqa kunye ne-snorkel kunxweme olufihlakeleyo lwamatye olunamachibi amatye ngokuthe ngqo ngaphantsi kwendlu.
4.93 · Izimvo eziyi-208
Ilali yaseBoca Cangrejo kwasekuqaleni yayiyindawo yokuloba enemiqolomba yendalo ekrolwe kumathambeka entaba-mlilo esiqithi. Ngoku yindawo eseluxolweni apho abalobi, amagcisa, amagcisa kunye neentsapho zasekuhlaleni zihlala kunye. Uya kufumana incasa yobomi bokwenyani baseCanary apha eBoca Cangrejo.
Kukho ulwandle oluhle lwesanti yentaba-mlilo emnyama "iPlaya La Nea" ngumgama omfutshane weemitha ezingama-500.
Ilali elandelayo ecaleni, iRadazul, ikwakuhambo lwemizuzu eli-10 kuphela, apho unokuhamba ngesikhephe, ukuloba, ukuntywila, ukuntywila emanzini ... okanye usele okanye utye into kwenye yeebhari zayo kwi-marina.
Le yindawo ekhetheke ngokwenene kwaye sisiseko esifanelekileyo sokuphumla, kude nezihlwele, kwaye uyisebenzise njengesiseko sokuhlola yonke into enokunikwa yiTenerife.
Umbuki zindwendwe ngu- Andrés & Natasha
Unokuhlala uqhagamshelana nathi ngexesha lokuhlala kwakho, sihlala kwidolophana elandelayo.
Emva kokwenza ugcino lwakho siya kukuthumelela isikhokelo solwazi sePDF, egcwele iingcebiso zethu zobuqu malunga nento omawuyiphonononge, indawo yokutyela kunye nolwazi oluluncedo malunga nefulethi.
Emva kokwenza ugcino lwakho siya kukuthumelela isikhokelo solwazi sePDF, egcw…
UAndrés & Natasha yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Santa Cruz de Tenerife